अलिमियाँ प्रतिष्ठानले बालन प्रदर्शन गर्ने | eAdarsha.com
अलिमियाँ प्रतिष्ठानले बालन प्रदर्शन गर्ने
पोखरा, ११ माघ । अलि मियाँ लोकवाङ्मय प्रतिष्ठान, कास्कीले आगामी माघ १३ गते शनिबार पोखरा सभागृहमा दशावतार बालन लोकनाटक देखाउने भएको छ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्यक्रमको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। शनिबार बिहान ११: ३० बजे पोखराको पृथ्वीचोकबाट झाँकीसहितको र्‍याली निकालिने पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
प्रतिष्ठानका सल्लाहकार डा. कुशुमाकर न्यौपानेले दशावतार बालन लोकनाटकको महत्त्वको विषयमा कार्यक्रममा बोलेका थिए।
उनले सो बालनमा दश अवतारको कथा गाथा, गीत, संवाद र अभिनयका साथमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिए। उनले भने-’यो नेपालको संस्कृति र समाजशास्त्रीय अध्ययनको विषय पनि हो।’
डा. न्यौपानेको यस लोकनाटकको अनुसन्धान गरी वि. स. २०६९ भदौमा ‘दशावतार बालन लोकनाटक’ नामको कृतिसमेत प्रकाशन गरिसकेका छन्।
दशावतार बालन लोकनाटक हिन्दू धार्मिक मान्यतासँग सम्बन्धित छ। यसमा हिन्दू धार्मिक मान्यताअनुसार भगवानका मत्स्य, कूम, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध र कल्की गरी दश अवतार प’रदर्शन गरिन्छ। नेपालको अन्य भागमा प्रायः लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको यो पाल्पाको रामपुरमा अहिले पनि प्रचलित छ। कार्यक्रममा रामपुरबाट नै लोकनाटक प्रस्तुत गर्न चार दर्जन कलाकारको उपस्थिति रहने संस्थाका अध्यक्ष हनिफ मियाँले जानकारी दिए। लोकनाटकका कलाकारले पा्रचीन र गाउँघरमा पाईने सामग्रीको प्रयोग गरी अभिनय प्रस्तुत गर्ने उनले बताए।
नेपाली वाङ्मयको विकास र लोककवि अलि मियाँका योगदानलाई जनमानसमा पुर्‍याउन प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो। प्रतिष्ठानले यस लोक नाटक प’रदर्शन गर्ने समूहलाई वि. स. २०६७ मा निःशुल्क भेषभूषा प्रदान र सम्मान गरेको थियो। संस्थाका अध्यक्ष हनिफ मियाँको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहसचिव फडिन्द्र अकिञ्चनले गरेका थिए। लोकनाटकको प’रदर्शनको लागि एक लाख ५० हजार खर्च हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ।